Marka suuqleyda ay ka wada hadlaan shakhsiyadeeynta ganacsiga e-commerce, waxay caadi ahaan ka hadlaan hal ama labo astaamood laakiin waxay seegaan dhammaan fursadaha si ay ugu abuuraan soo booqdehooda khibrad u gaar ah oo gaar ah iyo adeegsi shakhsiyadeed. Tafaariiqleyda internetka ee hirgeliyey dhammaan 4-ta astaamood - sida Disney, Uniqlo, Converse iyo O'Neill - waxay arkayaan natiijooyin aan caadi ahayn: 70% kororka ka-qaybgalka booqdaha ecommerce 300% kororka dakhliga raadinta 26% kororka sicirka beddelashada Halkaas oo ay u muuqato mid la yaab leh , warshadaha ayaa fashilmaya
Shalay Gowalla wuxuu ku dhawaaqay iskaashi uu la leeyahay mid ka mid ah magacyada ugu waaweyn meeraha - Walt Disney, Inc .. Waxaa jira dad badan oo shaki badan oo aan aaminsanayn warbaahinta bulshada - iskaba daa barnaamijyada juqraafiyeed ee bulshada sida Gowalla, (Foursquare iyo Facebook Places). ) Marka, maxay iskaashigan micno u sameyneysaa?
Bishii Diseembar ee la soo dhaafay, waxaan qoray qoraal ku saabsan sababta warshadaha filimku u fashilmaan. Waxaa laga yaabaa inaan qori lahaa sababta ay noo fashilayso 'annaga'. Si layaab leh, waa tan tii ku xigtay soo galitaankaas. Caawa, aniga iyo caruurta waxaan aadnay oo aragnay Burcad Badeedka Karibiya, Laabta Ninka Dhintay. Waxay ahayd inay si fudud ugu yeeraan, Burcad Badeedka Kariibiyaanka ah, Aynu Caano Filimmo badan oo ka mid ah tan inta aan kari karno. Saamaynta filimku waxay ahayd mid layaableh iyo